Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go 16.0.11727.20104 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 16.0.11727.20104 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှနှုတ်ကပတ်တော် app ကိုသငျသညျ, ပြင်ဆင်ရန်, အမြင်နှင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအခြားသူများနှင့်သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုဝေမျှဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသွားလေရာရာ၌သင်တို့နှင့်အတူရှိ features, အီးမေးလ်များကိုတွဲစာရွက်စာတမ်းများကိုတည်းဖြတ်သင့်ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းနှင့် Microsoft က Office ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။
သငျသညျ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင့်ရဲ့ရုံးသငျနှငျ့အတူလှုံ့ဆော်ပေး။ အဆိုပါစကားလုံး Processor ကို app ကိုသင်တစ်ဦးဘလော့ဂါစာရေးဆရာ, သတင်းစာဆရာ, ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်, ကျောင်းသား, သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့စီမံကိန်းမန်နေဂျာနေဖြစ်စေ, သင်ကဖြစ်ချင်သကဲ့သို့နေရာလေးကိုဖြစ်ပါတယ်။
သမ်မာကမျြးသင်၏ဖုန်းများအတွက်မိုဘိုင်း PDF ကိုစာဖတ်သူကိုမိတ်ဆက်။ Edit ကိုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်မှီ, ခရီးသွားလာစဉ် PDF များသို့မဟုတ် e-book ဖတ်ပါ, သို့မဟုတ်သင်ချင်တယ်နေရာတိုင်းမှာ။
စာရွက်စာတမ်းများ, script များ, ဘလော့ဂ်များ, ရေး-ups, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖန်တီးပါ။ Edit ကိုစာရွက်စာတမ်းများ, စာလုံး, ပြန်လည်စတင်ဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံးပုံစံရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအရေးအသားပြီးမြောက်ရန်သင့်အား enable ကြောင်းကြံ့ခိုင်ရေးကိရိယာများနှင့်သင်၏လမ်းကဖော်ပြသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီး, ပြင်ဆင်ရန်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သင် Microsoft Word ကိုအတူရောရာ၌သင့်ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်း။
Microsoft Word ကိုအင်္ဂါရပ်များ:
ယုံကြည်မှု အတူစာရွက်စာတမ်းများ Create
•လှလှပပဒီဇိုင်းခေတ်သစ်တင်းပလိတ်များနှင့်အတူဒေါ့စ်, တာဝန်တွေ, အက္ခရာ, ဘလော့ဂ်များ, Scripts, မှတ်စုများ, ပြန်လည်စတင်နှင့်ပိုပြီးဖန်တီးပါ။
•ကြွယ်ဝသောပုံစံချပေးနှင့် layout ကိုရှေးခယျြစရာမြားနှငျ့ Edit ကိုစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်၏အတွေးအခေါ်များချမှတ်သားခြင်းနှင့်စာအရေးအသား၌သူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့။
•စာရွက်စာတမ်းအယ်ဒီတာနေပါစေသင်အသုံးပြုသောအရာကိုကိရိယာအကြီးအယူနန်ပြည်နယ်နှင့်ရှာနေကို formats နဲ့ layout စောင့်ရှောက်။
•စာဖတ်ခြင်းကြည့်ရန်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာဖတ်ဒေါ့စ်, PDF များ, စာလုံး, script များနှင့်ထို့ထက် ပို. ။
•အလွယ်တကူအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ထံမှပြောင်းလဲနေဖြင့် PDF များကနေ Edit ကိုစာရွက်စာတမ်းများ။
•တည်းဖြတ်ပြီးနောက် PDF ဖိုင်ရယူရန်သို့စာရွက်စာတမ်းများပြောင်းနှင့်အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်နှင့်သင်၏ PDF ဖိုင်အားမျှဝေ။
မည်သူမဆို, ဘယ်နေရာမှာမဆို အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း
•ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဘေးမှာသငျသညျအကွောငျးဆှေးနှေးနေတဲ့စာသားရန်သင့် doc အတွက်မှတ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
•အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ် Edit ကိုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စာသား, layout ကို, Formatting ပြောင်းလဲမှုများထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့။
• Copy ကူး Microsoft Word ကိုနဂိုအတိုင်းယင်း၏ format နဲ့အတူအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ဖိုင်များကိုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ရန်သင့် PDF များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲလွယ်ကူဝေမျှစေ။
Microsoft Word ကိုယခု Download လုပ်ပြီးဘယ်နေရာမှာမဆိုစာရွက်စာတမ်းများကိုတည်းဖြတ်။
OS ဗားရှင်း: အန်းဒရွိုက်၏ထောက်ခံဗားရှင်းမဆိုနှင့် ARM-based သို့မဟုတ် Intel ရဲ့ x86 Processor ကိုတိုအပြေး။ KitKat သို့ & Lollipop device များအတွက်ပံ့ပိုးမှုဇွန်လ 2019 မကုန်မှီတိုင်အောင်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်
အထက် 1 GB RAM သို့မဟုတ်
စာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်ရန်, မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်အတူကိရိယာများပေါ်တွင်အခမဲ့ Windows Live Microsoft account တစ်ခုနှင့်အတူငယ်များထက် 10.1 လက်မဝင်ပါ။
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
rubystars စတိုး 5.44k 1.4M
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go အခ်က္အလက္
App Name: Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go
File Size: 131.06MB
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ